बैतडीको खोड्पेमा बस दुर्घटना कसरी भयो ? यस्तो छ घाइते र चालकको बयान !
मृतक ९ जनाकै सनाखत
अछामकोे चौरपाटी गाउँपालिका–४ का २६ वर्षीय अमृत कुमाल पेशाले ‘ड्राइभर’ हुन । उनी दार्चुलामा स्काभेटर चलाउँथे । दीपावलीमा अछाम घर जानका लागि बिहिवार साँझतिर अमृत महेन्द्रनगर आउने पवनदूत यातायातको ना ५ ख ५१४१ नम्बरको बस चढे ।
डडेल्धुरास्थित स्याउलेबाट अछाम जाने गाडी चढेर घर जाने योजना साथ बस चढेका उनी घर पुग्न पाएनन् । बरु अस्पतालको शैयामा पुगेका छन् । अमृतको जस्तै विभिन्न गन्तव्य पुग्नका लागि ४३ जना यात्रुले भरिएको बस बिहिवार राती साढे १० बजेतिर बैतडीको पाटन नगरपालिका–८ खोड्पेमा दुर्घटनामा प-यो ।
सडकबाट ६ सय मिटर तल खसेको बसमा सवार ४३ जनामध्ये ९ जनाले ज्यान गुमाए । अन्य ३४ जना घाइते भएका छन् । बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका अमृतको टाउको, कम्मर र छातीको चोट लागेको छ । उनी पनि डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचाररत छन् । ब्रिगेको गाडी जबरजस्ती चलाउँदा दुर्घटना भएको अमृत बताउँछन् ।
‘गाडीमा सुरुदेखि नै समस्या थियो । गुरुले टायरमा गन्ध आउँदैछ भनेर बिचमा रोक्दै चलाउँदै गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उकालोमा धौ धौँ गरेर गाडी हिड्दै थियो ।’ अमृतले दैनिक सञ्चारसंग भने, ‘गाडी राम्रोसंग बनाएर चलाउनु भन्यौँ तर उहाँले मान्नु भएन । केही हुदैन भनेर चलाएको केही समय पछि त गाडी अचानक फन्नक घुमेको जस्तो लाग्यो । मोड काटेको सोचेको थिएँ । तर गल्ड्याङ–गुल्डुग गर्दै सबै यात्रु तितरवितर भयौँ ।’ उनले अगाडि थपे, ‘कोही यात्रु निधाएका थिए, कोही निधाएका थिएनन् । गाडी चार पाँच पटक पल्टेपछि हामीहरु चिच्याउन थाल्यौँ ।’
पाटन नगरपालिका–८ खोड्पेमा बस पल्टिनु केहीअघि पनि उक्त गाडी दुर्घटना हुनबाट जोगिएको उनले सुनाए ।
दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका ९ जनाकै सनाखत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी निरीक्षक जनक बहादुर धामीले बताए ।
मृत्यु हुनेमा बैतडीको दोगडाकेदार–६ सित्तडका २५ बर्षीय प्रहरी जवान रणबहादुर चन्द, दोगडाकेदार ६ सित्तडकै २७ बर्षीय करनसिंह ऐर, दोगडाकेदार गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी कविन्द्र जोशी, कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका–८ तिलाचौरका १५ बर्षीया कृतिका कार्की र दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका ४ का र्तकराज गिरी रहेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका–५ का जगन्नाथ ओझा, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका १० विजना धामी, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–४ का नरेन्द्र चौधरी, धनगढी उपमहानगरपालिका–१८ का ऋषिराम चौधरीको पनि दुर्घटना परी मृत्यु भएको छ ।
दुर्घटनामा परी ३४ जना घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार गम्भिर घाइते २० जनालाई डडेल्धुरा अस्पतालबाट धनगढी रेफर गरिएको छ । बाँकी सामान्य घाइते १४ जना भने डिस्चार्ज भएका छन् ।
बस दुर्घटनाको यकिन कारण अझै खुल्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी मुकेश सिंह बताउँछन् ।
‘यात्रुहरुले गाडी बिग्रिएकाले दुर्घटना भएको बनिरहेका छन् । दुर्घटना हुनु अगाडि धुवा बढि फालेर गाडीमा समस्या आए पछि चालकले चेक गरेका दपाइएको छ ।’ एसएसपी सिंहले भने, ‘तर चालकले घुम्ती बाटो भएकाले स्ट्रेरिङ अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको भनिरहेका छन् ।’